रसुवागढी नाका जोड्ने सडकको पहिरो बुधबार बिहानबाट पन्छाउन थालिने
रसुवागढी नाका जोड्ने सडकमा झरेको पहिरो बुधबार बिहानबाट पन्छाउन थालिने भएको छ । मंगलबार बिहान झरेको सुक्खा पहिरोका कारण रसुवागढी नाका जोड्ने स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकखण्ड अवरुद्ध छ ।
हिमपातले केरुङमै रोकिए कन्टेनर
तिब्बतमा बुधबार बिहानदेखि लगातार बाक्लो हिमपात हुँदा केरुङबाट रसुवागढीतर्फ आउने कन्टेनर बाटोमै रोकिएको छ । केरुङमा तीन फिटभन्दा बाक्लो हिउँ जमेका कारण यातायात चल्न नसकेको हो ।
केरुङमा बन्द पसलको दुई वर्षदेखि भाडा तिर्दै नेपाली
तिब्बतको केरुङबाट घरभेटीको फोन आयो कि गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–५ स्याफ्रुका फुर्पा छिरिङ तामाङलाई तनाव भइहाल्छ । फोनमा उही पुरानो रटान दोहोरिन्छ, ‘कि सटर खाली गर्दिनू, कि खुरुक्क भाडा तिर्नू ।’ सटर खाली गर्न उनी केरुङ जान सक्दैनन्, किनभने आवतजावत बन्द छ । भाडा तिर्न उनीसँग पैसा छैन, किनभने व्यापार चौपट छ । के गरूँ के नगरूँ ? दोसाँधमा पर्छन् । त्यसै निन्याउरिएर बस्न बाध्य हुन्छन् ।
रसुवागढीको चर्चा धेरै, विकास थोरै
२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पअघिसम्म उत्तरी चीन जोड्ने रसुवागढी नाकाको खासै चर्चा थिएन । भूकम्पले जब तातोपानी नाका बन्द भयो, चीन–नेपालको सबैभन्दा पुरानो नाका रसुवागढी एकाएक चर्चामा आयो । त्यसमाथि भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण यो नाका थप चर्चित बन्यो । चीन सरकारले अनुदानमा दिएको तेल रसुवागढी हुँदै नेपाल भित्रिएपछि थप चर्चामा आएको थियो ।
रसुवागढी नाकाबाट बेसार र खुर्सानी निर्यात गर्ने यहाँका ब्यापारी मुकुन्द पौडेल अचेल घाम तापेर बसिरहेका छन् । मासिक ४० टनसम्म बेसार, खुर्सानी चीन पठाउने उनको व्यापार २२ महिनादेखि ठप्प छ । २२ महिनाअघि निर्यात गरेको सामान केरुङको गोदाममै थन्किएको छ । ‘करोडौं रुपैयाँको त्यो सामान अब कुहिएर काम नलाग्ने भइसक्यो होला,’ पौडेलले भने, ‘अब त बिक्री हुने आश छैन । उठाउन बाँकी अरु पैसा पनि रोकिएको छ ।’
रसुवा कांग्रेस सभापतिमा पेम्बाछिरिङ तामाङ निर्विरोध
कांग्रेस रसुवाको १४औं जिल्ला अधिवेशनबाट सभापतिमा पेम्बाछिरिङ तामाङ निर्विरोध चयन भएका छन् ।
‘बाँदर र भालुले भन्दा बँदेलले धेरै दुःख दियो । दिउँसो आउने बाँदरलाई त धपाउन सकिन्छ, राति बँदेललाई कसरी धपाउनु ? राति कतिखेर आएर बाली सखाप पार्छ थाहै पाइँदैन । पहिले ४–५ ठाउँमा खेती गरिन्थ्यो । अहिले एक ठाउँकै पनि जोगाउन गाह्रो परेको छ । सबै छोडिदियौँ । अन्नबाली त खाए–खाए अब घरमा आएर पनि दुःख दिन थाल्या छन्,’ गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका खाम्जिङका डुक्तर तामाङले वन्यजन्तुका कारण खेपिरहेको हैरानी एक सासमै सुनाए ।
रसुवामा नेकपा (एस) को पक्षमा सनाखत गर्ने जनप्रतिनिधि शून्य
रसुवाबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को पक्षमा सनाखत गर्ने जनप्रतिनिधि शून्य रहेको छ । एमाले विभाजन भएपछि निर्वाचन आयोगले दल रोज्न दिएको मंगलबार अन्तिम दिन हो । आज ५ बजेसम्म सनाखतका लागि कुनै पनि जनप्रतिनिधि नआएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।